ပြည်လမ်းမဘက် အင်းလျားကန်ပေါင်တွင် Wifi အခမဲ့ သုံးနိုင် ~ The ICT.com.mm Blog
ပြည်လမ်းမဘက် အင်းလျားကန်ပေါင်တွင် Wifi အခမဲ့ သုံးနိုင်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်လမ်းအပေါ်ရှိ အင်းလျား ကန်ပေါင်တွင် ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလမှ စ၍ Wifi အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းသို့ အသုံးပြုနိုင်ရန် Myanmar Network ကုမ္ပဏီက စီစဉ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြိုတော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ပန်းဥယျာဉ်နှင့် အားကစားကွင်းများဌာမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
“ပြည်လမ်းအပေါ်က အင်းလျားကန်ဘောင်မှာ အပန်းဖြေ လာရောက်သူတွေ အနေနဲ့ အနားယူရင်းနဲ့ အင်တာနက်သုံးလို့ရအောင်လို့ တပ်ဆင်ပေးထားတာပါ။ ၂၄နာရီ အသုံးပြုလို့ ရမှာပါ”ဟု အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။ ၄င်းအပြင် အင်းလျားကန်ပေါင်တွင် Wifi အခမဲ့ သုံးစွဲခွင့်အပြင် ကန်ပေါင်လုံခြုံရေးအတွက် CCTV ကင်မရာ နှစ်လုံးပါ တပ်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“CCTV ကင်မရာ နှစ်လုံးကိုလည်း ကန်ပေါင်လုံခြုံရေးအတွက် တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ပြည်လမ်းဘက်ကို မျက်နှာမူပြီး ထားတာကတစ်ခု၊ ကန်ဘောင်ဘက်ကို မျက်နှာမူပြီး ထားတာက တစ်ခုပါ။ အဓိက ကတော့ အင်းလျားကန်ပေါင်နဲ့ ပြည်လမ်းအပေါ်မှာ မှုခင်းတွေ မဖြစ်အောင်လို့ပါ”ဟု ယင်းတာဝန်ရှိသူက ဆက်ပြောသည်။ အင်းလျားကန်ဘောင်တွင် လာရောက်အပန်းဖြေသူ မဆွေဇင်က “ကန်ဘောင်မှာ အခုလို အခမဲ့ ဝိုင်ဖိုင် သုံးလို့ရပြီးဆိုတော့ အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်။ အရင်ကဆိုရင်တော့ လေညှင်းခံရုံလောက်ပဲ လာကြတာ။ အခု အင်တာနက်လိုင်း သုံးရတာမဆိုးလို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နေ့တိုင်း လာသုံးဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဆိုသည်။
Free Wifi in Inya
Newer အခြေခံပညာ ဆရာ/ ဆရာမများ ကျူရှင်သင်ခွင့် မရှိခြင်းအား ဝေဖန်
Older တစ်နေ့ ကော်ဖီသုံးခွက် အထက် သောက်သည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ သန္ဓေသား ပျက်စီးနိုင်
21 thoughts on “ပြည်လမ်းမဘက် အင်းလျားကန်ပေါင်တွင် Wifi အခမဲ့ သုံးနိုင်”
Pazi KuTie says:
yayyy go ja mel
really ???? Gooddddddddd
Sai Than Onh says:
တေနကုန္ စာက်က္မယ္ေလ လာျက သယ္ခ်င္းတို့
Mg Myo Aung says:
ေဟ ဟုတ္လား 😀
Tun Htun says:
အဝိုင္းလည္တာကုိ ကန္ေဘာင္မွာ သြားၾကည့္ၾကမယ္ေဟ့
Pinklady San says:
Uyi Mon says:
စိတ္မေကာင္းစရာပါလားကြယ္။ဒို႔ေတြေနတဲ့ၿမိဳ႔မွာဆိုရင္ဘယ္ေနရာမွာေရာက္ေနလဲဖံုးထုတ္ၾကည့္လိုက္ကြက္တိwififreeလိုင္းရိွေနရမယ္။freeလိုင္းဆိုၿပီးအထင္ေတာ့မေသးလိုက္ပါနဲ႔ Connection ကလဲလန္ထြက္ေနရမယ္။ျမန္မာျပည္မွာခုလိုမ်ိဳးၾကားရေတာ့ကိုယ့္ျမန္မာျပည္ကမိတ္ေဆြေတြအတြက္ကိုစိတ္ေတာင္မွမေကာင္းမိပါဘူး။အေနာ္ေစာ္ကားေျပာတာမဟုတ္ပါဘးူအေနာ္ကိုျမန္မာျပည္ကလို႔ေျပာရင္သတ္ပစ္မယ္ဆိုလဲအေနာ္ကျမန္မာျပည္မွာေမြးၿပီးႀကီးျပင္းလာခဲ့တာမို႔ျမန္မာျပည္သားဘဲေျပာမွာဘဲ။အေနာ္ကခု Chinese မွာေလအဲ့ဒီ့မွာ wifi ကေတာ့႐ွယ္ေပါ့ဗ်ာ။
Nga Pyae Yauk Kyar says:
Kyawphyominhlaing Phoethar says:
Naing MinSoe says:
Moemyintsan Lu says:
so miss.alot of chang
-_- wifi ရ၊ မရေတာ့မသိ၀ူး ခုံကေတာ့အၿမဲလူရွိတယ္ :/
Waiyan Aung says:
loading ေလးေတြသြားၾကည္ ့တာေပါ ့